MSS 4: မီးဖိုတွင်းမှနန်းတော်တွင်းသို့ - Zomi Adventist Innkuan
ဇန်နဝါရီ ၁၈ – ၂၄
ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း ဇန်နဝါရီ ၁၈
ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ဒံ၊ ၃။ ဗျာ ၁၃း၁၁-၁၈။ ထွက် ၂ဝး၃-၆။ တရားဟော ၆း၄။ ၁ကော ၁၅း၁၂-၂၆။ ဟေဗြဲ ၁၁။
”ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်သည် မီးလောင်လျက်ရှိ သောမီးဖိုထဲက အကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်လွှတ်နိုင်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော် ၏လက်မှလည်း ကယ်လွှတ်တော်မူလိမ့်မည်” (ဒံယေလ ၃း၁၇)။
”ဟေဗြဲလူငယ်များသည် ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝလျက် တစ်တိုင်းပြည် လုံးသို့ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပြသခဲ့သည်။ သူတို့ကိုးကွယ်သောထာဝရဘုရား သည် ဘုရားအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကို သက်သေပြကြသည်။ ထိုသို့ပြသခြင်းသည် သူတို့၌စည်းကမ်းပညတ်ကို လိုက်လျှောက်ကြောင်း သက်သေပြနေသည်။ ရုပ်ထုနှင့်ထာဝရအသက်ရှင် တော်မူသောဘုရားကို ယှဉ်တွဲပြိုင်ဆိုင်လာလျှင် ကိုယ်တော်၏အစေခံတို့သည် ထာဝရဘုရားကိုသာ ကိုင်းရှိုင်းကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းကို လက်တွေ့ပြသ လိုက်သည်။ ကိုယ်တော်သာ လျှင်တစ်ဆူတည်းသော ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ ဘုရား၊ အသက်ပင်သေပါစေ မိမိအသက်ကိုစွန့်၍ ထာဝရဘုရားကိုသာလျှင် ဝတ်ပြုမည်ဟု စိတ်ဒုံးဒုံးချကြသည်။ ရုပ်ထုဆိုလျှင် စိုးစဉ်းမျှတည်၍စဉ်းစား ရန်မလိုသူများဖြစ်သည်။ ဤသို့သောသင်ခန်းစာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံး နေ့ရက်ကာလကြုံတွေ့ကြရမည့်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲအတွက် တိုက်ရိုက်သင်ကြားမှု ပေးနေပါသည်။” Ellen G. White In Heavenly places, p. 149. အသက် အန္တရာယ်ကြုံလာသည့်အထိ အယူသီးမှုများ၊ သိပ္ပံနည်းကျခံယူမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုခြိမ်းခြောက်လာလိမ့်မည်။ နှုတ်ကပတ်တော်၏ဖော်ပြချက်အတိုင်း နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကာလ၌ ကမ္ဘာကြီးသည် ကြီးမားစွာတိုးတက်မှုကြောင့် နဂိုဖြစ်ခဲ့ဖူးသောအရာများ ပြန်၍ခေါက်ရိုးပြေလာလိမ့်မည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဤအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာရင်း သစ္စာရှိသောဘုရားရှင်၏လူများသည် ခက်ခဲမှုကိုရင်ဆိုင်ရမည်ဟု နှုတ်ကပတ်တော်မှဖော်ပြပြီးသားဖြစ်သည်။
တနင်္ဂနွေ ဇန်နဝါရီ ၁၉
ဒံ၊ ၃း၁-ရ ကိုဖတ်ပါ။ ထိုရုပ်ထုကြီးကိုပြုလုပ်ရန် ရှင်ဘုရင်အား မည်သည့်အရာက တွန်းအားပေးပြုလုပ်စေသနည်း။
အချိန်ကာလကလေးကြာလာသည်နှင့် မင်းကြီးသည် မိမိအိပ်မက်ခဲ့ သောရုပ်ထုကြီး၏တည်ဆောက်ပုံကိုသာ အာရုံထဲစွဲနေတော့သည်။ ဗာဗုလုန် တိုင်းပြည်ကြီးပျက်စီးသွားမည်၊ အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံမှ တိုက်ခိုက်အုပ်စိုးနေရာ ယူမည်ကို ရှင်ဘုရင်မေ့လျော့ဟန်ရှိသည်။ ဦးခေါင်းတစ်လုံးတည်းကို ရွှေဖြင့် မြင်မက်မှုအပေါ် လုံးဝကျေနပ်စိတ်မရှိပါ။ ဘုရင်ကြီးသည် ရုပ်ထုတစ်ခုလုံး ကို ရွှေအတိနှင့်ပြီးစေပြီး သူ၏တိုင်းနိုင်ငံသည် ရာဇဝင်တွင်အမြဲတည်တံ့ရ မည်ဟု ကြံစည်လေသည်။
ထိုသို့စိတ်ကြီးဝင်သောသဘောထားမျိုးမှ ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သူများသည် ထာဝရဘုရားရှင်ကိုပင် စိန်ခေါ်ရန်ကြိုးစားကြခဲ့ ကြသည်။ နေဗုခဒ်နေဇာမင်းသည်လည်း ထိုသို့သောသဘောထားမျိုးထက် မနိမ့်ပါ။ ဗာဗုလုန်တိုင်းပြည်ကြီးကို အဖက်ဖက်မှသာယာစိုပြည်အောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့သောသူဖြစ်ကာ၊ သူ၏တည်ထောင်ခဲ့သောတိုင်းနိုင်ငံကြီး ကွယ်ပျောက်သွားမည့်အရေးကို လက်မခံလိုပါ။ သို့ဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုအထင် ကြီးသောစိတ်ဖြင့် သူ၏တန်ခိုးနှင့်မြင့်မြတ်မှု၊ သူပိုင်ဆိုင်သောအရာများကို လူတိုင်းလေးစားရိုသေသမှုရှိရန် ရုပ်ထုကြီးကိုတည်ဆောက်လေတော့သည်။ ရုပ်ထုသည် ဘုရင်၊ သို့မဟုတ် နတ်ဘုရားတစ်ပါးပါးကို ပုံဆောင်မှုမပြုသည့် တိုင် ရုပ်ထုကိုတည်သည်နှင့် ထိုရုပ်ထုကြောင့် ဘာသာရေးအယူများရှုပ်ထွေး သွားပြီး၊ ဝေဝါးသွားစေသည်။
နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီး၌ စစ်မှန်သောထာဝရဘုရားနှင့်အကျွမ်းတဝင် ရှိရန် အခွင့်အရေးနှစ်ခုရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုသင့်သည်။ ပထမအနေ ဖြင့် ဟေဗြဲလူငယ်များကိုစစ်ဆေးမှုပြုသောအခါ၊ အခြားလူငယ်များထက် ဆယ်ဆသာလွန်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီ။ ယင်းနောက် အခြားသူများအားလုံး မင်းကြီး၏အိပ်မက်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လက်လျှော့ရပြီး၊ ဒံယေလမှာ မူ မင်းကြီးအိပ်မပျော်၍စဉ်းစားခန်းဝင်ခဲ့ပုံ၊ အိပ်မက်အကြောင်းနှင့်အနက် အဓိပ္ပါယ်ကို တစ်ပါတည်းဖော်ပေးပြန်သည်။ နောက်ဆုံး၌မင်းကြီးသည် ဒံယေလကိုးကွယ်သောဘုရားသည် ဘုရားအစစ်အမှန်၊ ဘုရားတကာတို့၏ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားဟု ဝန်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အံ့ဩစရာအလွန်ကောင်းသည် မှာ ထိုမျှလောက်ကြီးကျယ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ရပါလျက် နေဗုခဒ်နေဇာ မင်းကြီးသည် ရုပ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းသို့သာ ပြန်၍ပြန်၍ဦးလှည့်သွားပြန်သည်။ ဘာကြောင့်နည်း။ ဝါကြွားလိုစိတ်ကြောင့်သာဖြစ်မည်။ အပြစ်နှင့်ပြည့်ဝနေ သောလူသားများသည် မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားသော ဥစ္စာပစ္စည်း၊ ရာထူးပညာ များသည် ပျက်စီးတတ်ကြောင်း၊ ပျောက်ကွယ်တတ်ကြောင်းကို လက်မခံလို ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့၍မတည်မြဲသော အရာများနှင့် ထာဝရအသက်ကိုအလဲအထပ်ပြုချင်တတ်ကြသည်။
နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကျရှုံးသကဲ့သို့မဖြစ်ရလေအောင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုထောင်ချောက်ကို မည်သို့သင်ခန်းစာယူရှောင်ရှားကြမည်နည်း။
တနင်္လာ ဇန်နဝါရီ ၂ဝ
ဒံယေလ ၃း၈-၁၅ ကိုဖတ်ပါ။ ဗျာဒိတ် ၁၃း၁၁-၁၈ ကိုလည်း ဖတ်ပါ။ ဒံယေလအချိန်နှင့်နောင်ဖြစ်လာမည့်အနာဂတ်အချိန်စပ်ကြား အပြိုင် သွားနေသည့်အကြောင်းအရာမည်သို့တွေ့နိုင်သနည်း။
ရွှေရုပ်ထုကြီးသည် ဒုရလွင်ပြင်၌ ထီးထီးကြီးရပ်နေသည်။ အာခိတ် ဒီယာန်လူမျိုးတို့၏ဘာသာစကားအားဖြင့် ”တံတိုင်းခတ်ထားသောနေရာ” ဟု ရာစုနှစ်များစွာ အမြတ်တနိုးထားသောနေရာဖြစ်သည်။ ထိုမျှနှင့်မပြီးသေးပါ။ မီးပြင်းဖိုကြီးတစ်ခုလည်း အဆင်သင့်ပြင်ထားသည်။ ဗာဗုလုန်လူမျိုးတို့၏ တူရိယာတေးဂီတသံသည် ကိုးကွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဂီတ တူရီယာအမျိုးအစား (၇) မျိုးဖြင့်စီစဉ်ထားသည်။ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း၌ ပြည့်စုံထိရောက်စေရန်နှင့် သံခင်းတမန်ခင်းကျင်းပရာ၌ ပြည့်စုံခမ်းနားစေပါသည်။
See also MSS 12: မကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ဆက်ဆံရခြင်း
ယနေ့အသက်တာ၏ဘဝအခြေအနေ နေထိုင်ပုံကောင်းသည်ထက် ကောင်းအောင် ကြံဆတီထွင်နေထိုင်ကြသည်။ အသစ်သောအတွေးအခေါ် ယူဆချက်အမျိုးမျိုးဖြင့် တွေးခေါ်ယူဆကျင့်ကြံနေကြသည်။ ၎င်းအရာတို့မှာ ဘုရားရှင်ကိုဆက်ကပ်ထားသောအသက်တာအားမေ့လျော့စေရန်၊ နှုတ်ကပတ် တော်ကိုအလေးမထားတော့ဘဲ ခဏတာအောင်မြင်မှုတည်းဟူသော ဗာဗုလုန် အင်ပါယာ၏စည်းစိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရန် မိမိတို့အသက်တာကိုအပ်နှံချင်ကြသည်။ လောကီ၏ညှို့ဓာတ်ဆွဲဆောင်မှုသည် အရာအားလုံးကိုလွှမ်းမိုးနေသည်ဟု ထင်မြင်ရသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်မှာ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုသာ ဆွဲကိုင်သင့်သည်ကို သတိပြုရမည်။
ပုရောဖက်ပြုသတ်မှတ်သောအချိန်အတိုင်းအတာအရ၊ ကျွန်ုပ် တို့နေထိုင်နေသောယခုအချိန်သည် နောက်ဆုံးနေ့ရက်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ် (၁၃) ၏ကြွေးကြော်ချက်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနေထိုင်သော လူမျိုး အသီးသီးတို့အား သားရဲ၏ရုပ်ထု (အမှတ်တံဆိပ်) ကို ကိုးကွယ်ရန်စေခိုင်း လိမ့်မည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုကိစ္စသည် ”ငွေရတတ်သောသူ၊ ဆင်းရဲ သောသူ၊ ကျွန်ခံရသောသူ၊ လွတ်သောသူအကြီးအငယ်ရှိသမျှတို့သည် လက်ယာလက်၌ဖြစ်စေ၊ နဖူး၌ဖြစ်စေ တံဆိပ်လက်မှတ်ကိုခံစေခြင်းငှာလည်း ကောင်း” (ဗျာ ၁၃း၁၆) ဟုဖော်ပြထားသည်။
ထိုအထဲမှလူအမျိုးအစား (၆) မျိုးတို့သည် သားရဲ၏တံဆိပ်ကို ခံယူရန် အမိန့်ပေးခံရမည်။ ”ကြီးသောသူ၊ ငယ်သောသူ၊ ငွေရတတ်သောသူ၊ ဆင်းရဲသောသူ၊ ကျွန်ခံရသောသူ၊ လွတ်သောသူ” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သားရဲ၏ လက္ခဏာအမှတ်တံဆိပ်၏အရေအတွက်ကို ”၆၆၆” ဟုဆိုရာ၌၊ ”နံပါတ် ခြောက်” ကိုအထူးအလေးထားသည်။ ထိုကြောင့် နေဗုခဒ်နေဇာမင်းတည်ထား ခဲ့သော ရုပ်ထုကြီး၏အရွယ်အစားသည် နောက်ဆုံးနေ့ရက်ဆိုင်ရာ ဗာဗုလုန် ရှုပ်ထွေးခြင်းမှလုပ်ဆောင်သွားမည့် သင်္ကေတနိမိတ်ကို ပုံဆောင်မှုပြုထားနေ သည်။ (ဒံ၊ ၃း၁ မှ ရုပ်ထု၏အမြင့်အတောင်ခြောက်ဆယ်နှင့် အနံခြောက် တောင်ကိုသတိပြုပါ။) ထိုကြောင့် ဘုရားရှင်သည် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်နေကြောင်းကို ကမ္ဘာအဖြစ်အပျက်များနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ အထူးသတိချပ်နေကြရမည်ဖြစ်သည်။
ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဦးချရှိခိုးခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကိုယ်ထိလက် ရောက်ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းမှသာဖြစ်သည်မဟုတ်။ အခြားမည်သည့်နည်းလမ်း များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရဘုရားကိုဘေးဖယ်ထားပြီး၊ ထိုအရာကို ကိုးကွယ်ကြောင်း မည်သို့ပေါ်လွင်စေပါသနည်း။
အင်္ဂါ ဇန်နဝါရီ ၂၁
ဟေဗြဲလူငယ် (၃) ဦးသည် ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်အတွင်း ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပြီး၊ ယခုဘုရင်မင်းကြီးကိုးကွယ်ခိုင်းသောရုပ်ထုဦးချပွဲသည် ရိုသေသမှုမရှိ၊ ဝရုန်းသုန်းကား အတုအယောင်ကိုးကွယ်ခြင်းဟုယုံကြည် ကြသည်။ နန်းတွင်းအမှုထမ်းအရာရှိများအဖြစ် ရှင်ဘုရင်၏ မြှောက်စားခြင်း ကိုခံနေရကြသော်လည်း ထာဝရဘုရားရှင်ကိုကိုးစားခြင်းနှင့် လူကိုရိုသေလေးစား ခြင်းအပိုင်းကဏ္ဍများကို အကန့်အသတ်ဖြင့်သီးခြားထားရှိကြသည်။ ထိုရုပ်ထု ဦးချပွဲသို့ မပါဝင်နိုင်သော်လည်း မင်းကြီးကိုသစ္စာရှိစွာဖြင့် နန်းတော်အတွင်း အမှုထမ်းရန်စိတ်ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
ထွက် ၂ဝး၃-၆ နှင့် တရားဟော ၆း၄ ကိုဖတ်ပါ။ ထိုလူငယ်များ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ရန် အဆိုပါကျမ်းချက်များက မည်သို့လွှမ်းမိုးခြင်း ရှိခဲ့သနည်း။
ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်တော်အတိုင်း တူရိယာဂီတများတီးမှုတ်သံနှင့် အတူ လူထုကြီးအားလုံးသည် ရွှေရုပ်ထုကြီးကိုဦးချရှိခိုးကြကုန်၏။ ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အဗေဒနေဂေါသုံးဦးသည်သာ မကြောက်မရွံ့ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်ကို မနာခံခဲ့ချေ။ ချက်ချင်းပင်ကုန်းချောလိုသော ဗာဗုလုန်သားအချို့ ဘုရင်ကြီး အနားရောက်လာသည်။ ကုန်းချောပြစ်တင်ရန်အသင့်ရှိနေသောသူတို့သည် (၁) ဘုရင်ကြီးကိုယ်တော်တိုင် ဤဟေဗြဲလူသုံးယောက်ကို နေရာကောင်း ရာထူးကြီးပေးထား၍၊ ဗာဗုလုန်ကိုအုပ်ချုပ်စေခဲ့သည်မဟုတ်လား။ (၂) ယုဒ လူတို့သည် ဘုရင်ကြီးကိုးကွယ်သောနတ်ဘုရားများကို ဂရုမစိုက်ပါလား။ (၃) ဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်တည်ထားသောရွှေရုပ်ထုကြီးကို ဒီလူတွေမဦးချ မကိုးကွယ်ပါလား။ (ဒံ၊ ၃း၁၂)။ ကုန်းတိုက်ကုန်းချောစကားများကြားရ သော်လည်း၊ ရှင်ဘုရင်သည် ဒေါသမထွက်ဘဲ၊ ထိုလူငယ်သုံးဦးကို ဒုတိယ အကြိမ်အခွင့်အရေးပြန်ပေး၏။ ဘုရင်မင်းကြီးသည် မိမိ၏အစီအစဉ်ကိုပြီးဆုံး အောင်မြင်လိုသောဆန္ဒရှိနေသည်။ ထိုကြောင့် ထိုလူငယ်သုံးဦးသည် နေရာယူ ပြီး၊ ရုပ်ထုကိုဦးချကိုးကွယ်ရန်အခွင့်ပြန်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဘုရင် မင်းကြီးမှပေးသောအခွင့်အရေးကို ငြင်းဆိုသင့်ပါသလား။ သို့မဟုတ်လျှင် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်နေသောမီးဖိုပြင်းတွင်းသို့ ပစ်ချခံကြရမည်။ ယင်းနောက်မှ နေဗုခဒ်နေဇာမင်းသည် စိတ်ကြီးဝင်သောမာနဖြင့် ပြောထွက်လာသောစကားမှာ၊ ”ငါ၏လက်မှကယ်လွှတ်နိုင်သောဘုရားကား၊ အဘယ်ဘုရားရှိသနည်းဟု မိန့်တော်မူ၏” (ဒံ၊ ၃း၅)။
ထူးခြားသောရဲရင့်ခြင်းစိတ်တန်ခိုးကျရောက်လျက် သူတို့သည် ရှင်ဘုရင်အားပြန်၍တုံ့ပြန်သည့်စကားမှာ၊ ”အကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သောဘုရား သခင်သည် မီးလောင်လျက်ရှိသောမီးဖိုထဲက အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်လွှတ်နိုင် တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်၏လက်မှလည်းကယ်လွှတ်တော်မူလိမ့်မည်။ ထိုသို့ ကယ်လွှတ်တော်မမူသော်လည်း အရှင်မင်းကြီး၊ ကိုယ်တော်၏ဘုရားတို့ကို အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝတ်မပြုပါ။ တည်ထားတော်မူသောရွှေရုပ်ထုကြီးကိုလည်း မကိုးကွယ်ပါဟု ပြန်လျှောက်ကြ၏” (ဒံ၊ ၃း၁၇၊၁၈)။
သူတို့သည် မိမိတို့ကိုးကွယ်သောဘုရားရှင်မှ ကယ်နုတ်နိုင်တော်မူ ကြောင်းကို သိနေပါသော်လည်း၊ ကိုယ်တော်ဘုရားရှင်မှကယ်နုတ်မည့် အာမခံ ချက်အတိအကျမရှိပါ။ အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့ခြင်းခံရမည်ကိုသိနေသည့်တိုင် ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်ကိုငြင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို ကျွန်ုပ် တို့မည်သည့်နေရာ၌ရရှိနိုင်မည်နည်း။
See also MSS 9: စစ်ဆေးခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်စာရင်းများ
ဗုဒ္ဓဟူး ဇန်နဝါရီ ၂၂
ဒံယေလ ၃း၁၉-၂ရ ကိုဖတ်ပါ။ မည်သို့ဖြစ်ပျက်သနည်း။ မီးဖို ထဲ၌အခြားသောပုဂိ္ဂုလ်တစ်ဦးသည် မည်သူဖြစ်သနည်း။
ဟေဗြဲလူတို့ကို မီးဖိုထဲသို့ပစ်ချလိုက်သည်နှင့် နေဗုခဒ်နေဇာမင်း အလွန်အံ့အားသင့်ပြီး ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်သွားသည်။ အကြောင်းမှာ ပစ်ချစဉ်သုံးဦးသာဖြစ်သော်လည်း၊ ထိုသုံးဦးအပြင် စတုတ္ထပုဂိ္ဂုလ်တစ်ဦးကို ထပ်မံမြင်တွေ့ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စူးရှသောဉာဏ်ပညာရရှိခြင်းကြောင့် မင်းကြီးကိုယ်တိုင်မြင်နေရသောစတုတ္ထလူမှာ ”ဘုရားသား” ၏အဆင်းသဏ္ဌာန် ရှိသည်ဟု အာမေဋိတ်စကားသံထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ (ဒံ၊ ၃း၂၅)။
ရှင်ဘုရင်သည် စကားဆက်၍မပြောနိုင်တော့ပါ။ စတုတ္ထပုဂိ္ဂုလ်သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိနေကြပါသည်။ သောဒုံနှင့်ဂေါမောရ မြို့မပျက်စီးမီလေးတွင် အာဗြဟံဆီသို့ရောက်လာသောသူဖြစ်သည်။ ယဗ္ဗုတ် ချောင်းနံဘေး၌ ယာကုပ်နှင့်နပန်းလုံးခဲ့သောသူပင်ဖြစ်သည်။ မီးလောင်နေ သောချုံပုတ်အားဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုမောရှေ၏ရှေ့သို့ထင်ရှားသောသူပင်ဖြစ်၏။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်လူဇာတိမခံယူမီက မိမိ၏လူများကိုဘုရားရှင်ကွယ်ကာ စောင်မတော်မူကြောင်း၊ ဒုက္ခရောက်သည့်အခါ မိမိကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ကူညီ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အယ်လင်ဂျီဝှိုက်မှ ”ဘုရားရှင်သည် မိမိ၏လူတို့ကို ဘယ်သောအခါ မျှမမေ့လျော့ခဲ့ပါ။ မီးဖိုအထဲမှကယ်နုတ်သက်သေပြခဲ့သကဲ့သို့ ကယ်တင်ရှင် သည် ထောင်တွင်းထဲ၌လည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုထင်ရှားပြသခဲ့သည်။ မီးလျှံအလယ်၌အတူတကွလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြသည်။ ထာဝရဘုရား၏တည်ရှိ ရာနေရာတွင် မီးအပူနှင့်ချမ်းအေးခြင်းများလုံးဝအစွမ်းသတ္တိမရှိနိုင်။ လောင်ကျွမ်း နိုင်သောမီးဟူ၍လည်းမရှိတော့ပါ။” (ပုရောဖက်နှင့်ဘုရင်များ၊ စာမျက်နှာ ၅ဝ၈၊၅ဝ၉။)
ဟေရှာယကျမ်း၌ ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူသည်မှာ ”သင်သည် ရေကို လျှောက်သွားသောအခါ၊ သင်နှင့်အတူငါရှိ၏။ မြစ်တို့ကိုလျှောက်သွားသော အခါ မနစ်မမွန်းရ။ မီးကိုချင်းနင်းသောအခါလည်း မလောင်ရ။ မီးလျှံလည်း မညှိရ” (ဟေရှာယ ၄၃း၂)။
ထိုအကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့သည် သဘောကျသော်လည်း နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုမှ ကယ်တင်လွတ်မြောက်ခွင့်မရသူများအကြောင်းကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်တတ်သည်။ ထိုသူများအထဲတွင် ဟေရှာယနှင့်ဇာခရိတို့သည် အလွန်ရက်စက်သောရှင်ဘုရင်၏ကွပ်မျက်ခြင်းကိုခံကြရသည်။ သန့်ရှင်းမှန်ကန် လှသောလုပ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း၊ ယနေ့အချိန်အထိ သစ္စာရှိ ခရစ်ယာန်တို့သည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောနိဂုံးချုပ်ခြင်းမျိုးကို ရင်ဆိုင် ကြရသည်။ ကယ်တင်လွတ်မြောက်ခွင့်မရရှိဘဲ ရက်စက်စွာအသေသတ်ခံခဲ့ကြ ရသည်။ ယခုလေ့လာခဲ့သောဟေဗြဲလူများအကြောင်း၌ ထူးဆန်းစွာကယ်တင်ခံ ခဲ့ကြရသော်လည်း၊ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးသည် မကြာခဏဖြစ်လေ့မရှိပါ။
တစ်နည်းအားဖြင့် လောကအသက်တာ၌ သစ္စာရှိသောဘုရားရှင်၏ လူများအတွက် ကယ်တင်လွတ်မြောက်ရခြင်းအခွင့်ထက်သာလွန်သော အခြား တစ်ဖက်မှအံ့ဖွယ်လွတ်မြောက်မှုကြီးကား၊ မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။ (၁ကော ၁၅း၁၂-၂၆)။
ကြာသပတေး ဇန်နဝါရီ ၂၃
ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အဗေဒနေဂေါတို့၏အတွေ့အကြုံကိုသိရပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သည်လည်း မိမိကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်သင့်သည်။ ထိုမျှ လောက်ခိုင်မာသောယုံကြည်မှုရှိရခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်သည် အဘယ်အရာ နည်း။ ရုပ်ထုကိုဦးချကိုးကွယ်ခြင်းထက် အဘယ်ကြောင့်အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ခံရခြင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသနည်း။ ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်တော်ကိုနာယူလျက် ဦးညွတ်လုပ်ဆောင်ရန်သာရှိသည်ကို ဆင်ခြင်ကြပါစို့။ အသက်သေရမည်ကို သိသိကြီးနှင့် အများနည်းတူရုပ်ထုကိုဦးမချဘဲ ရဲရင့်တည်ကြည်စွာရင်ဆိုင် ရပ်တည်ခဲ့သည်။
ဟေဗြဲ ၁၁ ကိုဖတ်ပါ။ ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ မည်သို့ဖြစ်ကြောင်း သွန်သင်ထားပါသနည်း။
ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို မြှင့်တင်ဆောက်တည်နိုင်ရန်မှာ၊ ယုံကြည် ခြင်းဆိုသည်မှာ မည်သို့ဖြစ်ကြောင်းကိုနားလည်ထားရပါမည်။ အချို့သော သူများသည် ယုံကြည်ခြင်းကို အရေအတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့် သတ်မှတ် ရေတွက်လေ့ရှိသည်။ ဘုရားရှင်ထံမှရရှိသောအဖြေ၏အရေအတွက်အကြိမ် အားဖြင့် ရေတွက်သတ်မှတ်ကြသည်။ အချို့သူများတို့သည် ကုန်တိုက်ကြီး များသို့ဈေးဝယ်သွားကြသောအခါ၊ မော်တော်ကားထားရန်နေရာရှိဖို့ ကြိုတင်ဆုတောင်းတတ်ကြသည်။ ကုန်တိုက်အနီးမော်တော်ကားထားရန်နေရာ ရရှိသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသောကြောင့်ဟု သတ်မှတ်တတ်ကြသည်။ မော်တော်ကားထားရန်နေရာမရသောအခါမျိုး၌ ဘုရားရှင်သူတို့၏ဆုတောင်း ခြင်းကိုနားညောင်းနိုင်လောက်အောင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဟု သတ်မှတ် ကြသည်။ ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးသည် အန္တရာယ်ရှိသောယုံကြည်ခြင်း မျိုးဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်ကိုပြန်၍ကြိုးကိုင်ချင်သောယုံကြည်ခြင်း မျိုးဖြစ်၍ ထာဝရ ဘုရား၏အုပ်စိုးတော်မူခြင်းနှင့်ဉာဏ်တော်ကို အမှုမထားသောယုံကြည်ခြင်း မျိုးဖြစ်သည်။
ယုံကြည်ခြင်းအစစ်အမှန်ဟူသည်မှာ ဒံယေလ၏အဖော်များပြသသော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်အကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးခြင်းအဆင့်ကို ရေတွက်သတ်မှတ်သည်။ ထိုယုံကြည်ခြင်းမျိုး၏ရလဒ်သည် ထာဝရဘုရားကို လုံးလုံးလျားလျားယုံကြည်စိတ်ချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအစစ်အမှန် ဟုဆိုရာ၌ ဘုရားရှင်မှကျွန်ုပ်တို့၏အလိုဆန္ဒကို လိုက်လျောဖြည့်စွက်မည်ဟု မခံယူရပါ။ ဟေဗြဲလူသုံးဦးသည် မိမိတို့၏အလိုဆန္ဒအားလုံးကို ထာဝရဘုရား အားပုံအပ်လိုက်သည်။ ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်ကိုရင်ဆိုင်ရပ်တည်သွားလျှင် ဘုရားရှင်မှ ၎င်းတို့အားကာကွယ်ကယ်လွှတ်မည်၊ မကယ်လွှတ်မည်မှာ မသေချာလှပါ။ ဖြစ်လာမည့်အကျိုးဆက်ကိုအရေးမထားဘဲ၊ အမှန်တရား၌ ရပ်တည်ရန်သာ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်နေသည်။ အလွန်ရင့်ကျက်သောယုံကြည် ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းအမှန်ပင်ရှိ ကြောင်းကိုပြသရမည်၊ သို့သော် ကိုယ်တော်၏အလိုတော်ကို ဝန်ခံကိုးစား ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နားမလည်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများကိုပင်လျှင် ဘာကြောင့်ဖြစ်လာရသည်ကို စောဒကတက်ရန်မရှိပါ။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲစေရန် မည်သို့လေ့ကျင့်ယူရမည် နည်း။ သေးငယ်သောကိစ္စများမှာပင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွား စေပြီး၊ အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားသောအချိန်များဖြစ်စေမည်လား။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သောအမှုအရာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် စမ်းသပ်ခံရ၍၊ ၎င်းသည်အရေးအကြီးဆုံးအရာဖြစ်နေပါသလား။
See also MSS 8: ထာ၀ရဘုရားနှင့်ပဋိညာဉ်တော်
သောကြာ ဇန်နဝါရီ ၂၄
ဟေဗြဲလူငယ် (၃) ဦး၏ဒုရလွင်ပြင်မှအတွေ့အကြုံကို ကျွန်ုပ်တို့ သင်ယူလေ့လာရန်လိုပါသည်။ ယနေ့အချိန်အခါ၌ ဘုရားသခင်၏အစေခံ များစွာတို့သည် အပြစ်နှင့်အမှားအယွင်းများမလုပ်သည့်တိုင် စာတန်ဘက်တော် သားများတို့၏ဖိနှိပ်မတရားကျင့်ခြင်းများကို ခံကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဘာသာ ရေးတစ်ယူသန်သမားများ၏မုန်းတီးခြင်းကိုခံကြရမည်။ အထူးသဖြင့် စတုတ္ထ ပညတ်တော်မှ ဥပုသ်တော်နေ့စောင့်ထိန်းခြင်းကြောင့် ခါးသီးစွာအမုန်းခံကြ ရမည်။ နောက်ဆုံး၌ တကမ္ဘာလုံးသို့ တနင်္ဂနွေနေ့ဥပုသ်မစောင့်လျှင် သတ်စေ အမိန့်ထုတ်ပြန်လာသည်အထိ ရင်ဆိုင်ကြရမည်။
”ဘုရားရှင်၏လူများအတွက် ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသပ်သောအချိန် ရောက်လာမည်။ သို့သော် သူတို့သည် ဒယိမ်းဒယိုင်မဖြစ်၊ စကားထစ်ခြင်း မဖြစ်၊ ရဲရင့်ခြင်းသဘောနှင့်ယှဉ်လျက် ထာဝရဘုရားရှင်တစ်ပါးတည်းသာ လျှင်ကိုးကွယ်ရာဟု ရဲရဲတောက်ရင်ဆိုင်ပြသ၏။ အခြားအရာများထည့်စဉ်းစား ရန်မလို၊ အသက်ပင်မဓာနမထားကြတော့ပါ။ မှားယွင်းသောကိုးကွယ်မှုကိစ္စ ကို စိုးစဉ်းမျှလက်မခံကြ။ မြင့်မြတ်သောစိတ်သဘောဖြင့် အပြစ်ဖြစ်စေသော တိုက်တွန်း မှုအားလုံးကိုလက်မခံဘဲ၊ ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း အသက်ရှင်ကာ ထောင်ချပါစေ၊ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပါစေ၊ အသေသတ်ပါစေ အမှန်တရား ကိုသာနာခံ လိုက်လျှောက်သွားပေမည်။” ( Ellen G. White, Prophets and Kings, pp. 512, 513
Myanmar Sabbath School Lesson 4th Quarter 2019
MSS 6: ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုသေချာစွာဖတ်ရွတ်ခြင်း
Prev post MSS 4: Meileng, Mawtaw le Sabbath
Next post Church Manual (Mizo)